Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.6.2 enriched ajụ
Ọ bụ ezie na ọ pụrụ ịbụ imetosi, enriched ajụ pụrụ ịdị ike.
A dị iche iche obibia emeso ndị incompleteness nke dijitalụ Chọpụta data bụ jupụta ya ozugbo na nnyocha e mere data, a usoro na Aga m akpọ enriched ajụ. Otu ihe atụ nke enriched ajụ bụ ihe ọmụmụ banyere Burke and Kraut (2014) , nke m kọwara mbụ ke ibuot (Nkebi 3.2), ma inwe mmekọrịta on Facebook enwekwu enyi ike. Mgbe ahụ, Burke na Kraut jikọtara nnyocha e mere data na Facebook log data.
The ọnọdụ na Burke na Kraut na-arụ ọrụ na, Otú ọ dị, pụtara na ha enweghị obibi abụọ nnukwu nsogbu na-eme nnyocha na-eme enriched na-arịọ ihu. Akpa, n'ezie ejikọta, n'eziokwu, data tent-a usoro a na-akpọ ndekọ linkage, kenha nke a ndekọ na otu dataset na ihe kwesịrị ekwesị ndekọ na-ọzọ dataset-pụrụ isi ike na njehie na-agbakarị (anyị ga na-ahụ ihe atụ nke a nsogbu n'okpuru ). Nke abụọ isi nsogbu nke enriched ajụ bụ na àgwà nke dijitalụ metụtara ga-ugboro ugboro iji siere na-eme nnyocha na-amata. Dị ka ihe atụ, mgbe ụfọdụ, usoro site nke ọ na-anakọtara bụ proprietary na nwere ike ịbụ susceptible ka ọtụtụ n'ime nsogbu ndị a kọwara n'Isi nke 2. n'ụzọ ọzọ, enriched ajụ ga-ugboro ugboro na-agụnye njehie na-agbakarị ojiji nnyocha ndị e mere ka nwa-igbe data isi mmalite nke na-amaghị mma. N'agbanyeghị nsogbu n'obi na mmadụ abụọ a nsogbu ịme, o kwere omume na-akpa àgwà dị mkpa nnyocha na nke a atụmatụ dị ka e gosiri site Stephen Ansolabehere na Eitan Hersh (2012) ha nnyocha na ịtụ vootu usoro ke United States. O kwesịrị ka anyị na-aga ihe a na-amụ na ụfọdụ zuru ezu n'ihi na ọtụtụ n'ime ndị azum na Ansolabehere na Hersh mepụtara ga-abụ bara uru na ndị ọzọ ngwa nke enriched ajụ.
Voter turnout kemgbe isiokwu nke ọtụtụ nchọpụta na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọkà mmụta sayensị, na ihe ndị gara aga, ndị nchọpụta 'nghota maka onye votes ndien ntak emi n'ozuzu e dabeere na analysis nke nnyocha e mere data. Ịtụ vootu na US, Otú ọ dị, bụ ihe ọhụrụ omume na na ọchịchị ndekọ ma onye ọ bụla amaala nwere tozuru oke (N'ezie, ọchịchị adịghị idekọ onye ọ bụla nwa amaala votes maka). Kemgbe ọtụtụ afọ, ndị a ndị ọchịchị ịtụ vootu ndekọ e nwere na akwụkwọ iche-iche, n'ebe dị iche iche obodo ọchịchị ọrụ ndị dị gburugburu obodo. Nke a mere ka o siere, ma agaghị ekwe omume, ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọkà mmụta sayensị na-enwe a zuru oke nke onu na iji ihe ndị na-ekwu na nnyocha ndị e mere banyere ịtụ vootu ka ha hà n'ezie ịtụ vootu omume (Ansolabehere and Hersh 2012) .
Ma, ugbu a ndị a ịtụ vootu ndekọ e digitized, na a ọnụ ọgụgụ nke onwe na ụlọ ọrụ nwere n'usoro anakọtara na merged ndị a ịtụ vootu ndekọ na-emepụta keukwu nwe ịtụ vootu faịlụ na idekọ ịtụ vootu omume nke ndị America nile. Ansolabehere na Hersh partnered na otu n'ime ndị a ụlọ ọrụ-Catalist LCC-iji jiri nna ha ukwu ịtụ vootu file inye aka a mma foto nke onu. Ọzọkwa, n'ihi na ọ dabeere n'ebe digital ndia anakọtara na curated otu ụlọ ọrụ, ọ na-awa ọtụtụ uru n'elu gara aga mgbalị site na-eme nnyocha ahụ e mere mere na-enweghị enyemaka nke ụlọ ọrụ na-eji analọg ndia.
Dị ka ọtụtụ nke dijitalụ Chọpụta isi mmalite ke Ibuot 2, na Catalist nwe-file agụnyeghị ukwuu nke omume igwe mmadụ, attitudinal, na akparamàgwà ọmụma na Ansolabehere na Hersh mkpa. Na mgbakwunye na ozi a, Ansolabehere na Hersh ndị nwere mmasị karịsịa atụnyere kọrọ ịtụ vootu omume ka ọ dị irè ịtụ vootu omume (ie, onye ozi na-Catalist nchekwa data). Ya mere, ndị na-eme nnyocha anakọtara data na ha chọrọ ka akụkụ nke Cooperative Nzukọ Ezumezu Election Study (CCES), a nnukwu na-elekọta mmadụ nnyocha e mere. Ọzọ, na-eme nnyocha nyere ihe a data na-Catalist, na Catalist nyere na-eme nnyocha ndabere a merged data file na gụnyere irè ịtụ vootu omume (site Catalist), onwe onye na-kọrọ ịtụ vootu omume (site CCES) na demographics na àgwà nke ndị zaghachirinụ (site CCES ). Yabụ, Ansolabehere na Hersh enriched na ịtụ vootu data na nnyocha e mere data, na n'ihi merged faịlụ na-enyere ha aka ime ihe na ma file nyeere n'otu n'otu.
Site enriching Catalist nwe data file na nnyocha e mere data, Ansolabehere na Hersh wee atọ dị mkpa nkwubi okwu. Akpa, n'elu-akuko nke ịtụ vootu jupụtara, sị: fọrọ nke nta ọkara nke ndị na-abụghị Ndị Ntuli Aka kọrọ ịtụ vootu. Ma ọ bụ, ụzọ ọzọ nke na-achọ na ọ bụ ọ bụrụ na mmadụ kọrọ ịtụ vootu, e nwere nanị otu 80% omume na ha n'ezie tozuru oke. Nke abụọ, n'elu-akuko bụ random; n'elu-akuko a na-ahụkarị n'etiti ndị bara ọgaranya, gụrụ akwụkwọ nke ọma, partisans onye na-arụ n'ihu ọha omume. Yabụ, ndị na-abụ na ọtụtụ votu na-yikarịrị ghaa ụgha banyere ịtụ vootu. Nke atọ, na ọtụtụ oké, n'ihi Ịhazi ọdịdị nke n'elu-akuko, n'ezie ọdịiche dị n'etiti Ndị Ntuli Aka na-abụghị Ndị Ntuli Aka dị ntakịrị karịa na ha apụta dị nnọọ site na nnyocha ndị e mere. Dị ka ihe atụ, ndị na a bachelors ogo bụ banyere 22 pasent ihe ọzọ yiri ka na-akọ ịtụ vootu, ma nwere nanị 10 pasent ihe ọzọ yiri ka hà n'ezie votu. Ọzọkwa, ẹdude akụ dabeere nchepụta echiche nke ịtụ vootu na-ka mma na-ịkọ onye ga-akọ ịtụ vootu karịa n'ezie ndị na-votes, ihe ahụrụ anya Inweta na-akpọ maka ọhụrụ chepụtara ịghọta na ịkọ ịtụ vootu.
Ma, ole ka anyị kwesịrị ịtụkwasị obi ndị a na-arụpụta? Cheta a pụta adabere na njehie na-agbakarị ejikọ nwa-igbe data na-amaghị ichekwa njehie. More kpọmkwem, na-arụpụta mgbabere uzo on abụọ isi nzọụkwụ: 1) ikike nke Catalist ikpokọta ọtụtụ disparate data isi mmalite na-emepụta ezi-nwe-datafile na 2) ikike nke Catalist ejikọta ihe nnyocha e mere data ya ukwu datafile. Onye ọ bụla n'ime ihe ndị a bụ nnọọ ihe siri ike na njehie na ma nzọụkwụ pụrụ iduga na-eme nnyocha na-ezighị ezi nkpebi. Otú ọ dị, ma data nhazi na kenha bụ oké egwu ka nọgidere na ịdị adị nke Catalist dị ka a na ụlọ ọrụ ya mere na ọ nwere ike itinye ego ego n'ime ka nsogbu nsogbu ndị a, mgbe mgbe na a ọnụ ọgụgụ nke na ọ dịghị onye agụmakwụkwọ na-eme nchọpụta ma ọ bụ ìgwè nke ndị nchọpụta nwere ike dakọtara. Na n'ihu agụ na njedebe nke isi, m na-akọwa nsogbu ndị a na ihe nkowa na otú Ansolabehere na Hersh nwee obi ike na ha pụta. Ọ bụ ezie na ndị a nkọwa ndị a kapịrị ọnụ ka a na-amụ, mbipụta ndị yiri ndị a ga-ebilikwa ndị ọzọ na-eme nnyocha na-achọ inwere ejikọta nwa-igbe digital Chọpụta data isi mmalite.
Gịnị bụ n'ozuzu ihe na-eme nnyocha nwere ike ịmụta n'ihe ọmụmụ? Nke mbụ bụ na ezigbo uru si eme mmadụ ọgaranya digital metụtara na nnyocha e mere data. Nke abụọ, ọ bụ ezie na ndị a aggregated, azụmahịa data isi mmalite kwesịghị iwere ihe "n'ala eziokwu", na ụfọdụ ha ike bara uru. N'ezie, ọ kasị mma tụnyere ndị a data isi mmalite ghara zuru Eziokwu (nke ha na-mgbe niile adịghịkwa eru). Kama nke ahụ, ọ ka mma ji jiri ha tụnyere ndị ọzọ dịnụ data isi mmalite, nke invariably nwere njehie nakwa.